YAKADZIDZWA MUGERMAN, NYAYA DZICHIKA MUGERMAN COMPOSITION | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » Top German Courses » Specific Articels (Bestimmte Artikel)
Muchidzidzo cheGermany, tichapa ruzivo pamusoro pezvimwe zvikamu muchiGerman.
Muchidzidzo chedu chezvino, tichazojekesa zvimwe zvikamu muchiGermany, kusiyana pakati pezvimwe zvinyorwa uye zvinyorwa zvisingagumi, uye chii chinofanira kushandiswa maererano nezvimwe zvinyorwa uye zvisingagumi zvinyorwa mune shoko mumutsetse.
1 NYAYA DZOKUDZIDZWA MUGERMAN (ARTICEL MUMWE KWEFUNGWA KWANGU)
2 Nyaya Dzakanyora muGermany
3 Specific Zvirevo mumutauro weGermany uye Chimiro Chavo
ZVINOKUDZIDZWA MUGERMAN (ARTICEL MUNA COMPETITION YANGU)
Muchikamu chakapfuura, ruzivo pamusoro pezvinyorwa runopiwa uye kuvapo kwemarudzi maviri ezvinyorwa kunotaurwa. Muchikamu chino tichapa ruzivo pamusoro pezvikamu zviviri.
Kune mapoka maviri ezvinyorwa muGermany.
1) Nyaya dzakananga
2) Indeterminate Nyaya (positive-negative)
Muchikamu chino, tichaongorora nyaya dzezvimwe zvikamu, boka rekutanga.Asi kutanga, ngatitsanangurirei pfungwa dzevamwe uye dzisina chokwadi.
Nyaya Dzakanyora muGermany
Saka, zvimwe zvikamu zvinogona kushandiswa pano.
KUFUNGA IZVI: Mutauro weGermany Kutaura, Shanduro mubvunzo wemashoko nemitsara
Munyaya iyi, nyaya isina chokwadi ichashandiswa.
Ngatirambei tichienderera mberi mienzaniso yedu kuti tinzwisise zviri nani:
Somuenzaniso, Ali anoda tafura muimba yake. Regai Ali nababa vake vataure;
Ali: Baba, ngatitore tafura muimba yangu.
Tafura inotorwa pano haina kujeka nokuti inonzi masa tafura .. Kwete, ndinoreva, chero tafura.
Rega mutsetse wechipiri uve:
Ali: Baba, ngatitore tafura iyo mumba mangu.
Inonzwisiswa kubva mumutsara uyu kuti tafura yave yatoonekwa kana kutengesa kwetafura iko kwatopfuura. Saka vose vari vaviri vanoziva tafura.
Kubva pane chokwadi chinosanganiswa, mamwe magwaro anoshandiswa.
Ngatinyora zvishoma mitsara;
- Pane mufananidzo weTV manheru ano.
- Pane izvo zvinoratidzwa paTV zvakare manheru ano.
- Ndinoda hanzu. (kupfeka hakuna chokwadi)
- Ndinofanira kutora iyo nguo. (kupfeka chaiyo)
- Ngatitangei kutora maruva. (maruva asina chokwadi)
- Ngatiendei mvura iyi. (maruva chaiwo)
Takaedza kutsanangura zvimwe uye zvisinganzwisisiki mazano mumashoko ekupedzisira.
Pano, mamwe magwaro anoshandiswa mamwe mazwi anoshandiswa mumitauro, uye zvinyorwa zvisinganzwisisi zvinoshandiswa pamashoko asinganzwisisiki.
Zvinyorwa Zvinyorwa muchiGermany uye Chimiro Chavo
MuchiGerman, pane nyaya nhatu, der, das uye kufa.
Sezvataitaura kare, kutaura kwezwi rimwe nerimwe kwakasiyana.
Nokudaro, mazwi anofanira kudzidzwa pamwe chete nenyaya idzi. Mune dzimwe nzvimbo nyaya idzi dzakapfupiswa sezvinotevera:
der artikeli inoratidzwa netsamba r kana m.
kufa artikeli inoratidzwa netsamba e kana f.
The das artikel inoratidzwa netsamba s kana n.
Muchikamu chinotevera, tichaongorora zvinyorwa zvisinganzwisisiki.
KUFUNGA IZVI: Zita rechiGerman re Hali (German Genitiv) Kucherechedza
ZVINHU ZVINONYANYA KUVONESA MU ANKARA
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german nyaya inotaura, German artikeller, chimiro chinonzi articels chaiyo
MUVANZI KUCHOKURUKURWA - 6 KUBVUNZA
11 October 2014, 11: 20
Pane mutemo wezvimwe nyaya, saka kana shoko rinotanga kana kuti rinoguma naro, sezvinoitwa artikeli, mazita anorevei mazita maani anofa uye ndeapi mazita das artikel
11 January 2015, 21: 51
Zvingave zviri nani kana iwe ukapa muenzaniso.
21 January 2017, 13: 51
isu tinonzwisisa mienzaniso iyi apo ivo vaTurkey, asi zvakadini kana tichida kunyora muchiGermany neArtikeli zvatinoita
05 Mart 2018, 16: 03
Chidzidzo chako chinobudirira zvikuru uye chakanaka, asi ndinofunga kune dambudziko rakafanana neizvi muchiGerman, asi mienzaniso iri Turkish. Inogona kupiwa muchiGermany neTurkey yemutongo pamwe chete uye inogona kudzidza mazwi uye kunzwisisa nyaya yacho panguva imwe chete.
05 Mart 2018, 16: 26
Sawa, maiva nemifananidzo mune zvimwe zvinyorwa zvepaiti yedu.
Takawedzera mifananidzo kune iyi nyaya paunokumbira.
Ndinokutendai nokuda kwechido chenyu uye tinokuda iwe kubudirira.
Zvingava zvakanaka kutaura nyaya yacho, asi zvingava nani kana iwe ukapa mienzaniso yakawanda yeGermany